—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဝမ်းချုပ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုဝမ်းချုပ်ရင် ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေ စားသောက်ပြီး ဝမ်းမှန်အောင် လုပ်လို့ရနိုင်ပါသလဲ။ A. ဟုတ်ပါတယ်။ တချို ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ မကြာခဏ ဝမ်းချုပ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဝမ်းချုပ်တတ်ရင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီး...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ရေချိုးမဆင်ခြင်ရင် ရေပေါင်တက်တယ်ဆိုတာ မှန်ပါသလား . . .
——-၊ ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊——- Q. ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေအနေနဲ့ ရေချိုးဆင်ခြင်ရမယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ နေ့လယ် ၁၂ နာရီကျော်ရင် ရေမချိုးရဘူး။ ရေချိုးရင် မွေးလာတဲ့အခါ ရေပေါင်တတ်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ မှန်ပါသလား။ ဘယ်လိုအခြေအနေမှာ ရေချိုးဆင်ခြင်သင့်ပါသလဲ။ A. ဆရာတို့ကိုလည်း...